Maxaa ka Cusub Miisaaniyadda 2022 ee Somaliland. | Hargeysa World~Herald
Maxaa ka Cusub Miisaaniyadda 2022 ee Somaliland.
Wararka CaalamkaMaxaa ka Cusub Miisaaniyadda 2022 ee Somaliland.
(Sabti, 15-01-2022)-Ansixinta Miisaaniyadda Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa Maanta la ansixiyey. Miisaaniyaddan ayaa hagid u noqon doonta Hawlaha horumarinta dalka, iyo mushaharka shaqaalaha dawladda, waana qarashka dawladdu ku shaqaynayso sanadkan 2022.
Odoroska Miisaaniyaddan ayaa la horkeenay Golaha wakiilada Jamhuuriyadda Somaliland bishii Hore ee Decembar, 2021. Odoroska Misaaniyadda 2022 ayaa buuq badan ka dhalisay golaha la soo doortay., iyada Wasiirka Maaliyadda Sacad Cali Shire goluhu ka waydiiyey 80 su’aalood.
Maanta oo taariikhdu tahay 15-Janaayo ayaa miisaaniayddii la hor keenay golaha baarlamaanka. Ansixinta Misaaniyadda 2022, waxaa ka dhashay buuq badan, iyada oo xildhibaanada qaar laga saaray golaha markii ay dgaalameen.
“Horta waxaan doonayaa mid inaan saxo e, xidhibaanadu xoog iskuma muquuniyaan ee cod bay isku muquuniyaan” Xildhibaan Barkhad Jaamac Batuun oo ka hadlaayey buuqii saaka ka dhacay ansixinta Miisaaniayadda.
Maxaa Keenay Muranka Miisaaniyadda 2022.
Miisaaniyadda waxaaa lagu asteeyaa dhammaan qarashaadka dawladda, mushacaharka ciidamada kale duwan, mushaharka masuuliyiinta dawladda, mushaharka shaqaalaha dawladda iyo gunnooyin kale. Lacagtan ayaa ka soo xaroon doonta cashuuraha dawladdu ka qaaddo kastamyada dalka, cashuuraha kale duwan ee muwaadiniinta laga qaado, cashuurta shaqaalaha dawladda, iyo mucaawinooyinka lagu caawiyo Somalialnd sida sanduuqa horrumarinta SDF.
Xildhibaan Qaran, “waxaan soo jeedinayaa inagoo ixtiraaamaynaya guddida sidaas aan ku ansixino”. Miisaaniyaddan 2022, ayaa duuduub lagu ansixiyey kadib markii guddida dhaqaalaha ee goalaha wakiiladu ay is-beddel ku sameeyeen.
“Miisaniyaddan waxaa 30% mushaharkii loo kordhiyey Ciidanka Qaranka Jamhuuriyadda Somaliland, waxaa kale oo loo kordhiyey Macalilmiinta ka hawlgala wasaaradda Waxbarashada”, sidaa waxaa warbaahinta u sheegay Xildhibaan Barkhad Jaamac Batuun.
“Guddida dhaqaalaha Golaha Wakiiladu dheelitir aan hore ugu jirin bay goluhu ansixiyeen”, ayuu sii raaciyey.
. Miisaanayadda 2022 ayaan wax dooda la gelin taasina waxay keentay in xikdhibaano kamid goluhu ay dood ka keenaan hannaanka loo ansixyey misaaniyadda sandkan 2022.
“Waxaan Maanta leeyahay Shir Guddoonka Golaha wakiiladu sharciga ha ku noqdo”, Xildhibaan Guruje. Xildhibaanka oo ka hadlaayey miisaaniyaddan duuduubka lagu ansixiyey waxa uu yidhi, “Maanta ka baxdo yaanay tanoo kale dhicin”.
Golahan Cusub oo la doortay 31-May, 2021, ayaa ay miisaaniyaddani noqonaysaa tii ugu horraysay ee uu ansixiyo. Miisanayadda waxaa soo diyaariya xukuumadda, gaar ahaan, wasaaradda Maaliyadda. Miisayaddan waxaa la hor keenaa golaha wakiilaa dabayaaqadda sanadka. Ansixinta Miisaaniyadda Qaranka ayaa marta in goluhu duuduub ku ansixiyo, inuu ka doodo iyo in uu wax ka beddel ka sameeyo.